May 2019 – Nagarik Network
सपथपछि मोदी पुन: मुक्तिनाथमा।अर्को नाकाबन्दी !
किन गएनन् भीम रावल प्रचण्डको विहेमा ?
प्रचण्डले गाए “ओए झुमा झुम्कावाली”
सुर र स्वरको इन्धनले चल्ने नेपालको एकमात्र रेल, प्रमोद खरेल। प्रचण्डले गाए “ओए झुमा झुम्कावाली”। प्रचण्डको गायकीमा प्रमोद खरेलको जजमेंटले यसरी भयो हंगामा।